ဗရမ်းသပွတ် ဂေဇက်( ၄ – ၁၂ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဗရမ်းသပွတ် ဂေဇက်( ၄ – ၁၂ )
ဗရမ်းသပွတ် ဂေဇက်( ၄ – ၁၂ )
Posted by လင်းဝေ on Jan 25, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 16 comments
“ ကောင်းမွန်သင့်မြတ်ပါပေတယ် မင်းကြီး ”
“ အိမ်း ….. အသို့ဆိုလျှင် ဤဝဠာ ဤကမ္ဘာတွင် ဤမည်သော အရာကို ဤသို့ပြုကြပေကုန် ”
တကယ်တော့ ဂလိုမျိုးတန်းပြီး ဇာတ်ကို တောက်လျှောက်ဆွဲပြီး ခင်းတဲ့အဆင်ဖြစ်ရမှာပေါ့။ ရှေ့ဗရမ်းသပွတ် မှာ “ပြည်တည်” ပြီးသွားပြီဆိုတော့။
သို့သော်လည်းပဲ ကိုရီးယားကား အကြည့်များသည့် ဇာတ်ဆရာမှာကား လျှာရှည်ပြီး မွှေချင်တာ မွှေပါလေဦးမည်။ ဒါနဲ့ ပြည်တည် တာဆိုတာလေး ရှင်းပြလိုက်ဦးမယ်။
သိပြီးသားသူများ ကျော်ဖတ်ကြပေတော့။ ပြည်တည် တယ် ကြားတာနဲ့ လက်ယားပြီး ခွဲချင်စိတ်ချင် ဆွချင်မွှချင်တဲ့ ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ ဆေးခန်းအကူ များလည်း ရှိနေနိုင်တာမို့။
ပြည်တည် တယ်ဆိုတာကတော့ ဇာတ်တော်ကြီးများ ကတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်တိုင်း ဘယ်ပြည် ဘယ်အရပ်မှာ ဘယ်မင်းက ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်လို့ အဲဒီမင်းမှာ မိဖုယားက ဘယ်လောက်၊ တိတ်တိတ်ပုန်းက ဘယ်လို၊ သောက်ကျင့်(သေသောက်တတ်သော အလေ့) က ဘယ်ပုံ၊ သားတော်က ဘယ်လိုဆိုးပြီး သမီးတော်က ဘယ်လိုအမွှေ ဆိုတာတွေကို ဝန်ကြီး နှစ်ယောက် ( ဝန်ကြီးကို တစ်ပါး နှစ်ပါး ခေါ်ကြတာလည်း လျှာရှက် နားရှက်စရာ ကြီး မဟုတ်ပါလား ခိုးသား အပေါင်းတို့ ) က ကားလိပ်ရှေ့ထွက်လာပြီး အတိုင် အဖောက်နဲ့ ပြောကြပြီး ဘယ်ဇတ်ကို ဘယ်လိုခင်းမယ်ဆိုတဲ့ အထာလေး ပေးသွားတာပါပဲ။ ဇာတ်သဘင်အဖွဲ့ကြီးတွေမှာ ကတဲ့ ဇာတ်တော်များကတော့ နောက်ပိုင်း မိုးလင်းခါနီးမှ ကကြလို့ နောက်ပိုင်းဇာတ် လို့ နာမည် တွင်နေကြပါပြီ။ ညဦးပိုင်းမှာ ယိမ်းနဲ့ ဖွင့်ပြီး စတိတ်ရှိုးလိုက်လို့ အော်ပရာဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုလေးက ပြီးရင် တစ်ဖန် ပြဇာတ်ကြီးက( ဒိုင်းကနဲ ပစ်ကြ အားကနဲ အော်ကြ၊ သားးး အဖေ…. ဒီမှာ ကျုပ်ပြောမယ် ခင်ဗျားတို့တွေ မသေချင်ရင်….. ဒါမျိုးတွေ ပါတဲ့ ပြဇာတ်တွေပေါ့၊ ဒီလို ပြဇာတ်တွေနဲ့ နာမည်ကြီးတာတော့ မြို့တော်မောင်ယဉ်အောင် ပေါ့။ နောက် ဘီအီးဒီ အောက်သိုက် ဆိုတာရှိသေးတယ်။ ဟိုတုန်းကတော့ ကြည့်လို့ လွှတ်ကောင်းပေါ့ဗျာ၊ ကလေးရှိသေးတာကိုး။ ) ပြဇာတ်ကြီးကနေတုန်း စောစောက ယိမ်းကထားတဲ့ ယိမ်းသမ(ဇာတ်သမ) လေးတွေ က အလှပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ ပြဇာတ်လည်းပြီးရော ကန့်လာကာနောက်မှာ နေရာယူပေါ့ဗျာ။ ကားလိပ်ဖွင့်ဖို့လုပ်တုန်း ဇာတ်ပေါင်းခန်းမှာ ညားကြလေသတည်းလုပ်ထားတဲ့ စောစောက ပြဇာတ်ထဲက မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးမှာ ဖဲစက်ယာပေါ်မှာ ပေါင်းဖက်မပျော်နိုင်ရှာသေးပဲ အဝတ်အစား အမြန်လဲနေရတာပေါ့။ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးမလာခင် ယိမ်းသမတွေက အဆိုလေးတွေ ဆိုပြီး လက်ခုပ်တီးပြီး တွန့်ပြထားနှင့်ကြတုန်း လူပျက်များ အဝတ်ကို အမြန်လဲပြီး တက်လာကြတယ်။ တွေ့တဲ့ပျက်လုံး ကောက်ကက်ပြီး ပျက်နေတုန်းမှာ လက်အုပ်လေးချီပြီး ထွက်လာတာကတော့ ပြည်သူချစ်တဲ့ မင်းသားလေးပေါ့ဗျာ။ သူ့နောက်က မင်းသမီးလိုက်လာပြီး ပြောပြောဆိုဆို နဲ့ နှစ်ပါးခွင်မှာ တစ်အားထွင်တော့တာပါပဲ။ အဲဒီ နှစ်ပါးခွင်ပြီးရင် အချိန်ကလည်း ည ၁၂နာရီကျော်ပြီ။ အားလပ်ချိန်ပေးတယ်ဆိုပြီး ဇာတ်ခဏနားတယ်။ လူတွေလည်း အပြင်ထွက် အပေါ့သွား အလေးသွား တန်းစီပေါ့။ ဆက်လက်ပြီး ကမှာကတော့ နောက်ပိုင်းဇာတ်ပါပဲ။ ဇာတ်ခုံကြီးက ကန့်လန့်ကာကြီးချထားပေမယ့် မီးထိုးထားပြီး အသက်ကြီးကြီး ဇာတ်သမား(လူရွှင်တော်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့) နှစ်ယောက်လောက်က ကန့်လန့်ကာရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ပြည်တည် တော့တာပါပဲဗျား။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဇာတ်ပွဲတွေသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာ အဲဒီလိုများ ပြည်တည်နေရင် အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ဘာတွေ ပြောနေမှန်းကို မသိခဲ့ပါဘူး။ ပြည်တည်မှန်းလည်း မသိဘူး။ ဘာတွေ အရစ်ရှည်ပြီး ကာရံနဘေတွေနဲ့ ပေါက်ကရတွေပွားနေတာကို စိတ်မရှည်ခဲ့တာပဲသိတယ်။ အိပ်ချင်လာပြီကိုး။ စိတ်ကလည်း မဝင်စားတော့ဘူး။ စောစောက ပျက်လုံးတွေ ရယ်ရတာ မြူးလို့ အခုတော့ ဘာမှန်းမသိလို့ ထင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုခေတ် ဇာတ်ပွဲတွေများတော့ ဘယ်လိုကနေသလည်း မသိတော့ပါဘူး။ သွားတော့ကြည့်ချင်သား ဖိုးချစ်တို့ တင်ဇာမိုးဝင်းတို့ ခေတ်မှာ ဘယ်လိုကောင်မလေးတွေ လာကြည့်သလဲဆိုတာပါ။ အဲသလို ပြည်တည် တယ်ပြောချင်တာပါ။ လက်ကတော်တော် ရှည်ပြီး အများကြီး ရိုက်ပြ ရှင်းပြနေမိတယ်။ စိတ်မရှည်သော ပြည်သူများအား အကုသိုလ်ထပ်မံ မပွားစေလိုသဖြင့် ဖြတ်ပါတော့မယ်။ ပြည်တည် ကြတယ်ဆိုတာ ရှေ့ဆက်ခင်းချင်တာ ခင်းဖို့ နိဒါန်းပျိုးတာပေါ့ဗျာ။(စောစော ကတည်းက ဒီလို တိုတိုရှင်းလည်း ရနေတာကိုများ။) အချို့သော စာရေးဆရာများ ပြည်တည် ပုံများလည်း ရှိသေးတယ်။ “တစ်နေ့သ၌ ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက် ကျောက်ရေတွင်း အတိုင်း ကျွန်ုပ် တစ်ဦးတည်း လမ်းလျှောက်လာခိုက် နောက်ဖက်ဆီမှ ဆရာ ဟူသော ခေါ်သံကြားသဖြင့် လှည့်ကြည့်မိရာ ရှေ့မှ ခွေးချီးပုံကို တက်နင်းမိလေသည်။” (အမှန်တော့ ဘေးကလူကိုခေါ်တာ ဆရာခေါ်သံကြားရင် ကိုယ့်ခေါ်တယ် ထင်ကြတာကိုး) စသည်လို မျိုး နိဒါန်းပျိုးတာကို လည်းဆရာကြီးတစ်ပါးက ထွင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီဆရာကြီးကို ဒီမန်းဂေရွာထဲက ကိုရင်တစ်ဘား( ကိုရင်က လန်ဘားမို့ ကိုရင်တစ်ဘား လုပ်တာနော်၊ ကိုရင်တစ်ပါး ဖစ်ရမယ် ဆိုပြီး သတ်ပုံလာပြင်ရင်တော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ အချီအချ ဆွေးနွေးငြင်းခုံရကိန်း ဆိုက်သွားမယ်။ ဘာမှတ်နေလဲ။) က သိပ်ကြည်ညိုတာမို့ လွန်တာရှိရင် သူ့ဆရာကို ဒီကဇာတ်ဆရာ က မလေးမခန့်ရေးမိတာရှိရင် ဒီက ဇာတ်ဆရာကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့… နော်။
အဲသလိုနဲ့ပေါ့ ကျုပ်တို့ ရွှေပြည်မြန်မာလည်း ဒီတစ်ခွင်တော့ ကပြအသုံးတော်ခံဖို့ ပြည်တည်ပြီးသွားပါပြီဗျား။ လာမယ့် ဧပြီ မှာ ဘယ်လို ဧပရယ်ဖူးလ်နဲ့ ကမှာလား၊ ပျော်ရွှင်စရာတို့မြန်မာ ဆိုတဲ့ ခါသင်္ကြန် အဆိုအကတွေနဲ့ လောင်းလိုက်ကြပေါ့ ဒီအတာရေ ဆိုပြီး တီးကြ မှုတ်ကြနဲ့ ဘယ်လိုလာလို့ ဘယ်လိုကကြမလဲဆိုတာ သာ ရှုစားတော်မူကြပါ။ ( တော်တော့ ဇာတ်ဆရာ ရှင်ဆက်မပြောရင် ကောင်းမယ်။) အေးပါ။ တော်ပါပြီ။
တကယ့် ဗရမ်းသပွတ်ပါပဲ … ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာသား ကိုက်ပါပေတယ် …
ဘ၀ဆိုတာ အဆုံးအစမရှိတဲ့ အခန်းဆက်အိပ်မက်ကြီးဗျ။
တော်ပြီဆိုရုံနဲ့တော့ ဖြတ်ချလိုက်လို့ မရဘူးလေ။
မမြောက်ကြွားတဲ့ မင်းသားလေး စိန်လင်းမြွေ ပါခင်ဗျာ
ဟဲ့ဟဲ့… မင်းသား ကြဲတဲ့ မြေစာမြက်ထဲက မျှော့ တွေ ပါလာတယ်ဟဲ့
လက်မချရီသွားရအောင် အချက်ပြ စီ သွားတာတွေကလဲ လှဗျာ။
ခင်ဗျားကိုကျနော့ စိတ်ထဲ ပေါ်ထရေ့ လုပ်ထားတာ အဲဒါမျိုးတွေမပါဘူးဗျ။ ဟဲ ဟဲ။
တကဲ့ စူပါစီအီးအို တယောက်ရဲ့ ဟိတ်၊ဟန်၊ မာန်၊ထန်၊ လန်ပြန် အမှန်အကန်
ခု ဒီဇိုင်းဆိုရင်တော့ ပေါင်းလို့ လုံးဝ ရသွားပြီပေါ့ဗျာ။
ကျနော်ကလဲ ဖရီး စတိုင်ဘဲဗျ။
ပဲ သမားမဟုတ်ဘူး ဆိုတော့ဗျာ အားလူးဖုတ်ပြီး လာရော ညာစား တွေနဲ့
ပိုပြီး လေးစားသွားပါပြီ ဆရာကိုလင်းဝေရေ။
အဟဲ… ပဲလည်း မများ ဝဲလည်းမစား
အတည်လည်း မပေါက် ထိုင်လည်း မပေါက်ပဲ မတ်တပ်သာ ပန်းပါသည်
ဇာတ်မင်းသား ညိုချောကြီး ကို လူရွှင်တော်ကိုပေ့နဲ့ မင်းသမီးချော ဝေဝေတို့ ပါဝင်သည့် ပြဇာတ်ဒါရိုက်တာ ကိုသစ် ၏ ကျေးဇူးပါ ဇာတ်ပေါ့။
ဒီကနေ့ ခင်ဗျားကော်မန့်လေးတွေက အကြည်တော်ရုပ်ရှင်ထဲကဇာတ်ဆောင်တွေလိုဘဲ
ဘာတွေများ ရ ထားလို့လဲ? “ကြည်” လို့လဲ? ထူးခြားရင်ပြောအုန်းလေဗျာ။ဟဲ ဟဲ။
နားမလည်လို့မဟုတ်ပါဘူး connection ကျသွားလို့ပါ ….
ကျုပ်တို့က ကာရံတွေ နဘေတွေ(မောင်းမရတဲ့ နွားမ ဟုတ်ဘူး) ဆိုလွှတ် သဘောကျတာ။ များများရေးဗျိူ့။
ကိုလင်းဝေနဲ့ ကိုသစ်မင်း တို့ရေ..စိတ်တော့မဆိုးကြနဲ့ဗျာ..
ခင်ဗျားတို့ကာရံ နဘေ တကယ်တတ်ချင်ရင်တော့..
ရွာသား ကြီးကြောင် ဆီမှာ တပည့်ခံပီးဆည်းပူးသင့်ပါကြောင်း..ဟောင်း..ဟောင်း..ဟောင်း..
မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီက… ဥပဒေပြုရေး(လွှတ်တော်)၊ တရားစီရင်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး(အစိုးရ) စတဲ့မဏ္ဍိုင်တွေနဲ့.. သူတို့အလုပ် သဘောတရား သေသေချာချာသိနေဖို့လိုနေသေးတယ် ထင်မိတယ်..။
အောက်မှာ အရမ်းကောင်းတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးလေးတွေ့လို့ ကူးတင်ပေးထားပါတယ်..။
အဲဒါကို.. ဆီမီနာအောက်မှာရေးထည့်ပြီးမှ.. ဘယ်နားတင်ရမယ်မသိလို့.. ဟိုရှာဒီရှာနဲ့.. ဗရမ်းသပွတ်လိုက်တာ…
Read more: http://www.businessinsider.com/america-is-broken-heres-how-you-can-use-your-vote-to-fix-it-2012-1#ixzz1kSjFTH3P
ကျွန်မ မျက်စိ ထဲမှာတော့ ပြည်တည် တာ ကို ရုပ်သေး တွေ က နေတာဘဲ မြင်နေတော့တယ်။
အဲဒီတုန်းက ရုပ်သေး ကြိုးဆွဲ ပညာရှင် တွေ ဆိုတာ ရှိသေးတာကိုး။
အခုတော့ လူ အစစ် တွေ နဲ့ က ရင်ဖြင့် ကြိုးဆွဲ ပညာရှင် ဆိုတာ မလိုလောက်တော့ဘူး ထင်ပါရဲ့။
မဆိုင်ရင် ခွင့်လွှတ် ;-)
ဇာတ်ဆရာ စိန်လင်းမြွေ ကမယ့်ဇာတ်သိပြီ၊
သတ်ပုံမမှားတဲ့တိုင်းပြည် (သို့)အလံစိမ်းအောက်က ဇာတ်ဆရာ
(Ref:တော်တော့ ဇာတ်ဆရာ ရှင်ဆက်မပြောရင် ကောင်းမယ်။) အေးပါ။ တော်ပါပြီ။) jk
ရှိသေးတယ် ဇာတ်စင်ကို ခြောက်လေး သစ်ပြားကြီးတွေနဲ့ခင်းထားတာဂလား
ဒီဂျားထဲ နှစ်ပါးသွားကတဲ့အချိန်မှာ ဇာတ်မင်းသမီးတွေဝိုင်းပြီးထိုင်နေတဲ့အခါ
အောက်ကနေ ဇာတ်မင်းသမီးဖင်ကို ကြက်ခတ်ဆူးနဲ့သွားထိုးလို့ပြဿနာတက်တာတွေလဲရှိသေပါ့
ဖြစ်ခြင်တော့ ကျုပ်က ဘေးနားလေးမှာနေရာယူထားတာသူမှမသိတာ
ရှဲရှဲအသံတင်မကဘူး ဗွီ ကနဲ့အသံကြီးပါ အပိုကြားခဲ့ဘူးသေးတာပေါ့ဗျာ
မနက်စောစောထပြီး ပွဲခင်းထဲ ပိုက်ဆံလိုက်ရှာတဲ့ဘစ်ဇနစ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးသေးတယ်
ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါများက သန်လျှင်က ဘော်ဒါ တစ်ယောက်ဆီ
မိုးမင်းဇတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ ကွဲကြောင် ကွဲကြောင်နဲ့သွားကြည့်တာ
အော်ပရာလည်း ပါဘူး ပြဇာတ်လည်းပါဘူး
သချင်းဆိုဒယ် လူရွှင်တော်ပျက်တယ် …..
လူရွှင်တော်က ပျက်တာတောင် ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး လူရွှင်တော်နှစ်ယောက်
ဇာတ်စင်ရှေ့ခုန်ချလာပီးတော့ ပိတ်သတ်ကြီးကြားထဲမှာ ဟိုဖက်တစ်ယောက်
ဒီဖက်တစ်ယောက် မိုက်တစ်ယောက်တစ်လုံးနဲ့ ပျက်ကြကရော
ကမ်းကြီးပဲ မူးမှတ်တယ် ဒင်းတို့လည်း မူးနေလောက်တယ် ပိတ်သတ်ကြီးလက်ခုတ်သံကြားဒေါ့
သွေးတွေ ကြွပီး အိုဗာအိုက်တင်ဒွေ ဖြစ်ကုန်ရော့ထင်
မနက်မိုးလင်းလို့ ပွဲခင်းထဲပိုက်ဆံလိုက်ရှာတဲ့ ဘစ်ဇနစ်လုပ်ငန်းမှာ